ABOUT US - MMITSG
No.70/1, Kamar Street,
24 Quarter, Thuwunna,Yangon.
PHONE +95 (9) 95435 4445
Free Hosting Register
Myanmar IT Support Group (MMITSG) အဖွဲ့သည် ....
နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုတွင် Website (homepage) နှင့် Email တို့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရာများဖြစ် လာကြသည်။ Website (homepage) တစ်ခုသည် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ လူအားလုံးဆီသို့ သတင်းအချက် အလက်များ ပေးပို့ရာတွင် ကူညီ နိုင်ပြီး ကြီးမားသည့် စီးပွားရေး(လုပ်ငန်း) အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေနိုင်ပါသည်။
သင့်ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်း(Domain) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော email address ကိုသုံးခြင်းဖြင့် သင့်လုပ်ငန်း အပေါ်ယုံကြည်မှုနှင့် သင့်လုပ်ငန်း၏ အဆင့်အတန်းအခြေအနေကို မြင့်မားစေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီ၊အဖွဲ့အစည်းများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျယ်ပြန့်လာစေရန် Myanmar IT Support Group (MMITSG) အဖွဲ့မှ အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်-
Web Design ( homepage ပြုလုပ်ခြင်း)
Web Hosting (website ဖန်တီးခြင်း)
Digital Marketing & Local SEO (Google My Business Service ) ပြုလုပ်ပေးခြင်း
လုပ်ငန်းအတွက် အင်တာနက် အသုံးချတတ်စေရန် အကြံပေးခြင်း၊
Company Network Configuration
ကျွန်ုပ်တို့ Myanmar IT Support Group (MMITSG) ၏ ခံယူချက်-
မြန်မာကုမ္ပဏီများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Myanmar IT Support Group (MMITSG) မှအရည် အသွေးမြင့် မားသော IT နည်းပညာဖြင့် ကူညီပေးရန်၊ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တဖက်တလမ်းမှကူညီ ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။
Myanmar IT Support Group (MMITSG) မှ အောက်ပါအတိုင်း လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းများ ၊ Company များ ၊ အသင်း အဖွဲ့များ ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် Online Advertising Services များ ကို ဈေးနှုန်း ချိုသာစွာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
Internet ပေါ်တွင် ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်တော့မည့် လူကြီးမင်းများအတွက် ခေတ်မှီ လှပသေ သပ်သော ၊ ဖတ်ရလွယ်ကူရှင်းလင်းသော အပြင်အဆင် ၊ ထိရောက်သော အရေးအသားများ ၊ ချိုသာသော ဈေးနှုန်း ၊ မှန်ကန်တိကျသော နည်းပညာများဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ဈေးကွက် ရှာဖွေရေး website များကို ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။Internet ပေါ်တွင် ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်တော့မည့် လူကြီးမင်းများအတွက် ခေတ်မှီ လှပသေ သပ်သော ၊ ဖတ်ရလွယ်ကူရှင်းလင်းသော အပြင်အဆင် ၊ ထိရောက်သော အရေးအသားများ ၊ ချိုသာသော ဈေးနှုန်း ၊ မှန်ကန်တိကျသော နည်းပညာများဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ဈေးကွက် ရှာဖွေရေး website များကို ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကျနော်တို့ Myanmar IT Support Group (MMITSG) တွင် Website Plan အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိပြီး ၊ ရှိနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည် ပမာဏပေါ်မူ တည်ပြီး Domain + Hosting အပါအဝင် ၄၅,ဝဝဝ/- ကျပ် မှ ၁၂ဝဝ,ဝဝဝ/- ကျပ် အထိ ဈေးနှုန်း ခြားနားမှုရှိပါသည်။
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ကျနော်တို့အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဖုန်းနံပါတ် (+၉၅) ၀၉ ၉၅၄၃၅၄၄၄၅ ၊ ၀၉ ၄၂၁၆၁၅၅၅၄
Copyright © 2021, Myanmar IT Support Group. All Rights Reserved. | Developed by: MMITSG